प्रभु साहले खोले नयाँ पार्टी, ५१ सदस्यीय कमिटी तयार, बीप्लब सित एकता गर्दै — Imandarmedia.com
प्रभु साहले खोले नयाँ पार्टी, ५१ सदस्यीय कमिटी तयार, बीप्लब सित एकता गर्दै
काठमाडौ। माओवादी परित्याग गरी नेकपा एमालेमा लागेका पूर्वमन्त्री प्रभु साह एमालेमा नरहने र माओवादीमा पनि नफर्कने निष्कर्षमा पुगेका छन्। अब उनले पुरानै नेकपालाई ब्युँताउने भएका छन्। नेकपा पुनर्गठन’का लागि साहको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको नामावलीसमेत तयार भइसकेको छ।
केपी ओलीले हाम्रा ८ बुँदे मागहरु पूरा नगरी केही नेतालाई टपक्क टिपेर पद बाँड्ने र फकाउने नीति मात्र लिएको हुनाले हामी एमालेमा रहन नसक्ने भयौं, प्रभु साह निकट एकजना नेताले जानकारी दिदै भने।
‘त्यसैले अब साहको अध्यक्षतामा नेकपा पुनर्गठन गर्न लागिएको हो। ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको नामावली तयार भइसक्यो, केही दिनमै घोषणा हुन्छ। यसअघि प्रभु साह नेकपा माओवादी केन्द्रमै फर्कने चर्चा पनि चलेको थियो।
तर, माओवादीको मुख्य नेतृत्वले यसमा चासो नदेखाएको भन्दै साहले बेग्लै पार्टी बनाउने निर्णय लिएको स्रोतले बतायो। तत्कालका लागि नयाँ पार्टीको नाम नेकपा नै राखेर अघि बढ्ने साहको तयारी छ।
नेकपा पुनर्गठन गर्ने साहको तयारीलाई एमालेभित्र रहेका अन्य पूर्वमाओवादी नेताहरुले पनि साथ दिने बुझिएको छ। साहले बनाउने केन्द्रीय कमिटीमा दुई दर्जन बढी पूर्वसभासदहरुको नाम समावेश हुने स्रोतको दाबी छ।
रौतहटका पूर्वमाओवादी सांसद एवं पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्री रहेका साहले यसअघि एमालेबाट असन्तुष्ट भई आइटी आर्मी गठन गरेका थिए।
आइटी आर्मीको ब्यानरमा प्रदेश २ मा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेका उनले यसमार्फत सातै प्रदेशमा नेटवर्क बनिसकेको बताउँदै अब देशैभरि नेकपा पुनर्जाग्रित गर्ने लाइन लिएको स्रोतले बतायो।
र उनले निकट भबिष्यमा सबै साना पार्टी मिलाएर विप्लब सित् सहकार्य गरि ठुलो पार्टी बनाएर प्रचण्ड र ओलीलाई धुलो चटाउने योजना बनाएको श्रोतले बतायो। यो कुरा थाहा पाए पछि एमाले र मावोबादी केन्द्रमा रडाको मचिएको छ।
यसैगरि, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आउँदो चुनाव नजित्ने दाबी गरेका छन।
हिजो आइतवार एमाले झापा जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको वृहत् पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफूहरूले जिताइदिएको सांसद सङ्ख्या गनेर प्रचण्ड, माधवले संसदमा फार्तीफुर्ति गरेको भन्दै उनीहरूले आउँदो चुनावमा नजित्ने दाबी गरेका हुन।
माधव नेपाल चुनाव नउठ्ने र समानुपातिकमा बस्ने जिकिर गर्दै अध्यक्ष ओलीले समानुपातिकमा पनि नेपालको मत नआउने तर्क गर्नुभयो। उहाँले दुवै नेतालाई आउँदो चुनाव जितेर देखाउन चुनौती समेत दिएका छन।
अध्यक्ष नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई विध्वंशकारी, विनाशकारी र अस्थिरता ल्याउने तत्त्वको संज्ञा दिँदै गठबन्धनलाई कसैले मत नहाल्ने बताएका छन। उनले वर्तमान सरकारको कुनै गन्तव्य नभएको पनि आरोप लगाए।
ओलीले भने, ‘प्रचण्डको फुर्ती हामीले जगाइदिएको हो। अब जितेर देखाऊन् प्रचण्डले ? माधव नेपाल अब चुनाव लड्छन् ? तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु म, माधव नेपाल चुनाव लड्दैनन्। समानुपातिकमा बस्छन्।
आउला र खाउँला भनेर, त्यो हुनेवाला छैन। कुनै हुनेवाला छैन। कसले भोट दिन्छ यिनलाई अब ? यी विध्वंशकारी तत्त्व हुन्। यी विनाशकारी तत्त्व हुन् । अस्थिरता ल्याउने तत्वहरु हुन्। स्थिरता बनाउने तत्त्वहरू होइनन्।
यिनलाई अब भन्छन्– जाऊ न अदालतबाट परमादेश लिएर आऊ। हामी कहाँ किन आउँछौँ ?’अध्यक्ष ओलीले अरू नेताहरूलाई एमालेमा फर्किन आग्रह गर्दै माधव नेपाललाई भने एमालेले नलिने कुरा दोहर्याए।
माधव नेपाल देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा र उनीहरूसँग साँठगाँठ गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न हिँडेको आरोप छ। ओलीले सबै वामपन्थी, कम्युनिस्ट, लोकतान्त्रिक तथा प्रजातन्त्रवादीहरूलाई एमालेमा समाहित हुन आह्वान पनि गरेका छन।
यसै गरि, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शक्ति राष्ट्रहरू अहिलेको गठबन्धन भत्काउनेतर्फ लागेको बताएका छन्। चितवनको भरतपुरस्थित आफ्नै निवासमा नेकपा माओवादी केन्द्र भरतपुर- २६ दिव्यनगरले गरेको सम्मान कार्यक्रममा शेरचनले शक्ति राष्ट्रहरूको दबाब अस्वीकार गर्ने आँट गठबन्धनसँग भएको बताए ।
उनले भने, ‘विदेशी शक्तिहरूमार्फत नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि ठूलो चुनौती देखिएको छ, राष्ट्रिय रूपमा अप्ठ्यारो परिवेश भए पनि यो गठबन्धनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र बचाउन अहिलेको विदेशी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्ने विश्वास मैले लिएको छु।
उनले पछिल्लो समय बुझीनबुझी संघीयताका विरोधी र राजतन्त्रका पक्षमा भएका टीकाटिप्पणीसमेत अर्थहीन भएको बताए। उनले भने, ‘दास व्यवस्थातर्फ हैन, वैज्ञानिक र उत्कृष्ट समाज विकासमा छलफल गर्न सकिन्छ। तर यसको विरोध आवश्यक छैन।